Ngaba Unako Ukuyiqonda IBhayibhile | Imibuzo YeBhayibhile Iyaphendulwa
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiKwangali IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
Ngaba unako ukuyiqonda iBhayibhile?
IBhayibhile liLizwi likaThixo. Ifana neleta evela kutata onothando. (2 Timoti 3:16) EBhayibhileni uThixo uchaza oko sinokukwenza ukuze simvuyise, isizathu sokuba evumele ubungendawo, noko aza kukwenzela uluntu kwikamva. Kodwa ke abefundisi beecawa baye bayigqwetha iBhayibhile; ngenxa yoko abantu abaninzi bacinga ukuba abanakuze bayiqonde.—IZenzo 20:29, 30.
UYehova uThixo ufuna sazi inyaniso ngaye. Kungeso sizathu le nto esinike incwadi enokuqondakala.—1 Timoti 2:3, 4.
Ungenza njani ukuze uyiqonde iBhayibhile?
Ngaphezu kokuba uYehova esinike iBhayibhile, uye wasinceda ukuba siyiqonde. Wathumela uYesu ukuze asifundise. (Luka 4:16-21) UYesu wanceda abaphulaphuli bakhe ukuba baziqonde izibhalo, ecaphula ivesi emva kwenye.—Luka 24:27, 32, 45.
UYesu waseka ibandla lamaKristu ukuze liqhubeke nomsebenzi awayewuqalile. (Mateyu 28:19, 20) Namhlanje abalandeli bakaYesu bokwenyani banceda abantu ukuba bakuqonde oko iBhayibhile ikufundisayo ngoThixo. Ukuba ungathanda ukuqonda iBhayibhile, cela amaNgqina kaYehova akuncede.—IZenzo 8:30, 31.
Ukuba iBhayibhile ibhalele ukuba yaziwe okanye iqondwe, kutheni kufuneka uncedwe ukuze uyazi?